Dabaasha Damuljadiid iyo Darxumada Dadka! – Bashiir M. Xersi
Dabaasha Damuljadiid iyo Darxumada Dadka!
Date: 11 Sep 2013Author: Bashiir M. Xersi 8 Comments
Hadda ka hor ayaa dalka Faransiiska waxaa ka dhacay hoos u dhac dhaqaale oo uu qaaliyoobay Rootigu, ka dib dadkii ayaa waxay dhigeen Mudaharaad, iyagoo hal ku dhiggoodu ahaa; “ROOTI, ROOTI, ROOTI” Boqoradda oo daaqadda ka aragtay dadka bannaan baxa samaynayey, ayaa waydiisay waxa ay u bannaan baxayaan? Markaa ayaa lagu yiri: “ROOTI la’aan ayey ka cabanayaan!” Markaa ayey ku warcelisay: “Oo maa KEEG iska cunaan!”.
Damuljadiid iyo Shaqada iyo Dhaqaalaha.
Damuljadiid iyo Maamul Goboleedyada.
Damuljadiid iyo Dunida.
Previous Previous post: Ku meel gaarkii ma laga baxay?!
Next Next post: New Dullinnimo iyo Dallaaliinta cusub!
8 thoughts on “Dabaasha Damuljadiid iyo Darxumada Dadka!”
Pingback: In xasan soo laabanayo waxaan ku gartay W/Q:- Bashiir M. Xersi | Breaking News, Science and Technology-FIIDOOW.com
Pingback: Bashiir M. Xersi:-In xasan soo laabanayo waxaan ku gartay | Indhodeeq.com
Pingback: In xasan soo laabanayo waxaan ku gartay - Xogdoon News